Ireo emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Jose Alfocea | | Emulators, Lalao Android
Iray amin'ireo fahitana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny lalao video dia, tsy isalasalana, ny PSP an'i Sony (PlayStation Potable). Ity horonan-tsary ity dia nankafy fiainana lava sy vanona nandritry ny fito taona, lasa iray amin'ireo console lalao maharitra maharitras. Efa hitantsika herinandro vitsivitsy lasa izay ny Android PSX emulator ary izao dia ny taranaka mandimby.
Ny PSP an'i Sony dia manana be dia be ny lohanteny hilalaoRaha ny marina, ny orinasa dia nitondra ny sasany tamin'ireo lalao avy amin'ny PlayStation mankany amin'ny PSP, mba hahafahan'ny mpampiasa mankafy azy ireo na aiza na aiza. Ankehitriny, ho fanampin'izany, azonao atao koa ny milalao ny lalao PSP amin'ny finday avo lenta na takelaka Android. Ny zavatra niainana dia tsy mitovy mihitsy na izany aza eto ny sasany amin'ireo emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android. Raha tianao ny konsole taloha dia aza adino ny NDS emulator avy amin'ny Nintendo izay azonao apetraka amin'ny findainao.
AwePSP dia iray amin'ireo emulator PSP tsotra indrindra ho an'ny Android misy izany. Mila manomboka fotsiny ianao ary mifantina iray amin'ireo lalao alainao ary manomboka milalao. Tsotra toa izany. Toy ny ankamaroan'ny emulator console video, AwePSP izy io koa dia misy olan'ny fahombiazana sy ny mifanentana, na dia hiankina amin'ny lalao manokana tianao hilalao aza izany.
Raha tsy izany, AwePSP dia manohana asa sy fiasa fototra Ahoana ny fomba hanavotana ny toetoetran'ny lalaoo, ny fanampiana ireo mpanara-maso ivelany sy maro hafa. Tsy misy isalasalana fa safidy tsara izy io indrindra mety ho an'ireo izay miditra amin'ny emulator. Inona koa, manohana endrika maro Ny rakitra dia ao anatin'izany .iso, .cso, .elf, .ISO, .CSO, .ELF. voatahiry ao anaty karatra SD na fitaovana fitahirizana USB.
Ireo izay tena mahatakatra ny emulateur dia manamafy izany PPSSPP no tsara indrindra amin'ireo emulator PSP ho an'ny Android. Ny antony dia, telo, amin'ny ankapobeny, na dia hiankina betsaka amin'ny hery sy ny fahombiazan'ny terminal anao aza izany rehetra izany:
Io ve no betsaka indrindra mora ny fampiasana
Izy io no manolotra tsara kokoa sy lehibe kokoa compatibilidad miaraka amin'ny lalao
Io no manome ny tsara indrindra fampisehoana
Ary koa, izy io dia emulator azo sintonina maimaim-poana; Marina fa misy doka azonao esorina amin'ny alàlan'ny fahazoana ilay kinova pro tokony ho enina euro, vidiny izay tsy ratsy velively raha jerena ny kalitaony.
Tsy azontsika hadino koa fa manolotra izany fanavaozana matetika, izay manampy amin'ny fahombiazany tsara. Tena tsara fa ilay taloha, AwePSP, dia heverin'ny maro ho kopian'ny PPSSPP izay tsy mahatratra ity ambaratonga ity.
Iray amin'ireo emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android ny RetroArch. Afaka maka tahaka ny lalao PlayStation Portable an-jatony sy an-jatony, RetroArch dia mampiasa ny rafitra Libretro izay amin'ny ankapobeny mihazakazaka plugins izay miasa tahaka ny emulateur. Noho izany, RetroArch dia afaka miasa ho emulator ho an'ny rafitra lalao rehetra, raha mbola manana ny plugin ilaina ianao.
Ny fiasa sy ny fahombiazany dia azo ekena, na dia hisy heriny lehibe aza ny herinao sy ny fahombiazan'ny terminal anao. Toy ny emulator hafa, manana olana mifanentana ihany koa izy io, miankina amin'ny lalao inona.
Ny tena lesoka dia ny, tsy toy ny PPSSPP, manolotra a curve fianarana miavaka satria ny rafitra dia sarotra ampiasaina. Na dia izany aza, dia safidy tena tsara izay azonao andramana ary, izany tokoa malalaka tanteraka ary loharano misokatra.
Safidy mahaliana iray hafa amin'ity fisafidianana emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android ity OxPSP. Miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny iray tapitrisa sy ny naoty 4,1 amin'ny 5 ao amin'ny Play Store, manolotra a nohavaozina ny interface interface ho mora ampiasaina eo am-panolorana ireo fiasa fototra ho an'ny ambin'ny emulator toa ny fitehirizana sy ny famoahana ny fivoaran'ny lalao ataonao, ny fanohanana ireo mpanara-maso ivelany, ny lalao an-tserasera ary ny fahafaha-milalao lalao maro sy maro.
Amin'ny ankapobeny dia manolotra a fahombiazana tsara sy fandidiana na izany aza, toy ny ambiny, misy olana mifanentana sasany amin'ny lohateny sasany ihany koa. Na izany na tsy izany dia emulator izay azonao sintonina ao a tena malalaka ary ento any amoron-dranomasina amin'ity faran'ny herinandro ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ireo emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android
Toni Garcia Noguera sary placeholder dia hoy izy:
TENA MAHAY TAMIN'ANDRIAMANITRA aho, FA NOVISY TAMIN'IZAO TONTOLO IZAO, NY GAME ATAON'NY ANAO
Valiny tamin'i Toni Garcia Noguera
Jose Suarez dia hoy izy:
Lahatsoratra maharikoriko re izany. Mampalahelo fa na iza na iza nanoratra azy dia tsy mahalala, satria raha nanao fikarohana farafaharatsiny izy, dia ho tsapany fa ny emulator REHETRA izay notanisainy dia klone an'ny PPSSPP, dia ny Core of RetroArch aza no milaza fa PPSSPP aza. Io no antsoiko hoe lahatsoratra manoratra satria tsy misy zavatra hafa soratany.
Valiny tamin'i José Suárez